नारायण अधिकारी सोमबार, जेठ २०, २०७६, १८:००
(आरुबोटे) पाँचथर– पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका-३, आरुबोटमा जेठ ६ गते राति भएको हत्या घटनाको त्रास र तरंग अझै सेलाएको छैन। बमबहादुर फियाक र धनराज शेर्मा (ससुरा-ज्वाइँ) का परिवारका ९ जनाको हत्यामा बमबहादुरकै ज्वाइँ मानबहादुर माखिमको हात रहेको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरिसकेको छ।
पाँचथरको दुर्गम गाउँमा एकैरात भएको ९ जनाको हत्या घटनालाई प्रहरीले आपराधिक इतिहासमै एक व्यक्तिले गराएको भयंकर अपराधको रुपमा लिएर अनुसन्धान जारी राखेको छ।
घटनापछि नेपाल लाइभ टिम घटनास्थल आरुबोटे पुगेको थियो। हामीले उक्त घटनामा पारिवारिक सम्बन्ध, आर्थिक लेनदेन, सामाजिक कारणसमेत खोतलेका छौं। यति भयंकर हत्याकाण्डमा एकै व्यक्ति संलग्न हुन सक्छ कि सक्दैन? झुन्डिएर आत्महत्या गरेका मानबहादुर र हत्या गरिएका परिवारको सम्बन्ध कस्तो थियो? मानबहादुरको व्यवहार, मनोदशा र विगत कस्तो थियो? शृंखलाबद्ध रुपमा हामीले रिपोर्टिङ गरेका छौं।
पहिलो शृंखलामा घटनामा जोडिएको भनिएको सिसाकाण्ड बारे अन्तरकुन्तर खोतल्ने प्रयास गरेका थियौं। यो दोस्रो शृंखलामा सिसाकाण्डमा मानबहादुरको संलग्नता कति थियो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रहरी, बिरामी, अस्पताल र स्थानीयवासीसँग जानकारी लिएका छौं।
आरुबोटे घटनाको केही दिन बितिसकेको छ। तर, स्थानीयको अनुहारमा भय गायब भइसकेको छैन। नृशंस हत्यापछि गाउँले राम्ररी निदाउन सकेका छैनन्। गर्मीमा बाहिर सुत्ने कतिपय साँझ नपर्दै ढोका लगाएर भित्र छिरिसकेका हुन्छन्।
यहाँका बासिन्दामा जेठ ६ गते रातिको घटनाले पछ्याइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ।
घटनामा एकाएक सिसाकाण्ड जोडिएपछि भने गाउँलेहरु थप अन्योलमा छन्। जुन दिन सिसाकाण्डको हल्ला चल्यो, त्यही दिन पाँचथरकै हिलिहाङ गाउँपालिका–४ कात्तिके भन्ने ठाँउमा १५ वर्षीया किशोरी शीतल योङहाङको घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो।
त्यसको भोलिपल्टै फाल्गुनन्द–२ का भगीरथ बाँस्तोला पक्राउ परे भने अर्का हत्या आरोपी पदम तामाङ भने हिजो आइतबार झापाको दमकबाट समातिएका छन्।
कक्षा १० मा पढ्ने युवतीको विभत्स हत्यापछि विद्यार्थी लगायत स्थानीयले फरार हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै पाँचथरमा आन्दोलन सुरु गरे। आन्दोलन साम्य पार्न खटिनुपर्ने, युवतीका हत्याराबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने र पक्राउ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रहरीमा छँदै थियो।
युवती हत्या गम्भीर भन्दै अनुसन्धानमा जुटेको पाँचथर प्रहरीलाई चक्मा दिनेगरी यही बेला बाहिरियो, सिसाकाण्ड। सिसाकाण्डपछि भने सो आन्दोलन मत्थर भएको गाउँले बताउँछन्।
मानबहादुरका ससुरा बमबहादुर फियाकको घर। यहाँ बमबहादुरसहित ४ जनाको हत्या भएको थियो।
नुनमा सिसा मिसिएको घटना (बैसाख ३० गते) जेठ १ गते मात्र प्रहरीकहाँ पुगेको थियो। उक्त घटनाबारे विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ र आशंकित व्यक्तिप्रतिको निगरानीमै थियो प्रहरी। धनराज शेर्माको घरमा भएको सिसाकाण्डबारे यथार्थ पत्ता नलाग्दै उनको शेर्मासहित घरका ५ जना र ससुरा बमबहादुर फियाकको घरमा ४ गरी ९ जनाको हत्या भयो।
त्यसपछि झनै पेचिलो बनेको सिसाकाण्ड अझै रहस्यमै छ।
सिसाकाण्डबारे स्थानीय दशमी प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय रविले अनुसन्धान गरिरहेका थिए। धनराजका परिवारका सदस्यले सिसा मानबहादुरले हालेको आशंका गरेका थिए।
खानामा सिसा मिसिएको थाहा पाएपछि बैसाख ३० गते नै धनराजकी श्रीमती जस्मिताले धनकुटामा रहेकी आफ्नी जेठी दिदी दिलमायालाई फोनमार्फत उक्त कुराको जानकारी गराएकी थिइन्।
बमबहादुरका ४ छोरीमध्ये दिलमाया जेठी हुन्। माइली जस्मिता र कान्छी मनकुमारीको हत्या भइसकेको छ। अब जेठी दिलमाया लिम्बू र साइँली बुद्धमाया खजुम जीवित छन्।
२९ गते राति धनराजको घरको नुनमा सिसा हालिएको आशंका गरिएको थियो।
सोही राति एक युवा कालो प्लाटिकको पोको बोकेर बमबहादुरको घर नजिकै उभिएको देखेको बताउने जस्मिता फियाक (धनराजकी पत्नी) को हत्या भइसकेको छ। उनकी दिदी दिलमायाले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भनिन्, 'घर नजिकै बरको रुख छेउमा एउटा केटो कालो झोला बोकेर उभिएको थिएछ। भन्ज्याङको सानुभाइ भन्नेले देखेको रे। उसैले जस्मितालाई भनेपछि मलाई फोन गरेको थियो।' सानुभाइलाई देखेपछि ती युवा पश्चिमतर्फ ओरालो लागेको उनको भनाइ छ।
जस्मिता फियाककी दिदी दिलमाया।
धनराजको घरमा नुनमा सिसा हालेर बमबहादुरको घरमा पनि आएको र मान्छेले देखेपछि नहाली भागेको हुन सक्ने बमबहादुरका छोरीहरुको आशंका छ।
यसअघि पनि बेलाबेला बमबहादुरकी कान्छी छोरी मनकुमारीका कपडा घरबाटै हराउने र बारीका कान्लाहरुमा फालेको अवस्थामा भेटिने गरेको पनि हामीले सुन्यौं। यो गतिविधिमा पनि मानबहादुरकै संलग्नता हुन सक्ने उनीहरु दाबी गर्छन्।
८ जना बिरामी भएर उपचार गराउन फिदिम आइपुगेपछि सदरमुकाम प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। परिवार, छिमेकी गाउँलेले आशंका गरे जस्तै नुनमा सिसा मानबहादुरले नै हालेका हुन् त? यसबारे अनुसन्धान गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पाँचथरका प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेललाई हामीले सोध्यौं।
'मानबहादुरमाथि आशंका गरिएपछि हामीले उनको कल डिटेल पनि मगायौं। सिआइबीले समेत यसको टेक्निकल पाटो केलायो,' उनले भने, 'तर मानबहादुरले नै सिसा हालेको हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौं।’
प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडल।
३० गते बिहानको खानामा सिसा परेको भनेपछि २९ गते राति नै नुनमा सिसा हालेको हुनुपर्ने प्रहरीको अनुमान छ। सोही अनुसार २९ गते साँझदेखि ३० गते दिनभर मानबहादुरको मोबाइल लोकेसन प्रहरीले हेरेको थियो।
बिटिएस लोकसन हेर्दा मानबहादुर फिदिम बजार देखिएकाले उनले नुनमा सिसा नहालेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको प्रहरी निरीक्षक पौडेल बताउँछन्।
मानबहादुरले होइनन् भने सिसा कसले मिसायो त? यो प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म यसको जवाफ पत्ता लगाउन सकेको छैन।
घटनास्थल आरुबोटे र फिदिमबीचको दुरी।
मिलन केन्द्र नेपाल नामक संस्थाले बैसाख १५ देखि आरुबोटेस्थित धनराज शेर्माको घरमा ढाका सिलाई-बुनाई सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको थियो। तालिममा बिहानी खानाको रुपाम थुक्पा खाएका ६ सहभागी मनिषा नेपाली (२०), लक्ष्मी लिम्बू (२२), विष्णु विक (१९), सोना लिम्बू (१९), मनकुमारी लिम्बू (३३) र मेनुका दास (१७) मात्रै होइन धनराजका दुई छोरीहरु युहाना र मुना पनि बिरामी भए।
जेठ १ गते आठै जनालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल फिदिम लगियो। मनिषा नेपाली र लक्ष्मी लिम्बूको अवस्था गम्भीर भएकाले उनीहरुलाई भने ५ बजे फिदिमकै समर्पित अस्पताल भर्ना गरियो।
के नुनमा मिसाइएको सिसा नै थियो त? उपचारका क्रममा डाक्टरले नयाँ कुरा पो पत्ता लाए कि? यिनै प्रश्नले पछ्याएपछि हामीले समर्पित अस्पतालका डाक्टर विशालचन्द्र सुवेदीलाई सोध्यौं।
डाक्टर विशालचन्द्र सुवेदी।
‘त्यो दिन के भयो हामीले केही थाहा नै पाएनौं। मनिटर गरेर बसियो,' उनी भन्छन्, 'भोलिपल्ट दिउँसो १० बजेबाट उनीहरुले हाउभाउमार्फत केही इसारा गर्न थाले। त्यसपछि ग्यास्ट्रिक जस्तो लक्षण देखिएकाले हामीले त्यही अनुसार उपचार गर्‍यौं। बिस्तारै सुधार हुँदै गएपछि उनीहरुले पर्सिपल्टबाट खाना खान थाले।'
पेट र घाँटी दुख्ने गरेको बताएका मनिषा र लक्ष्मी अस्पताल ल्याउँदाल्याउँदै बाटोमा वान्ता भएपछि बेहोस भएका थिए। त्यसको करिब डेढ घन्टामा उनीहरु अस्पताल पुगेका थिए। अस्पताल ल्याइपुर्‍याउँदा दुवै जना बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्।
बिरामी लिएर आएका मानिसले नुनमा सिसाजस्तो वस्तु लिएर आएका थिए। सिसा खाएपछि बिरामी भएको उनीहरुले डाक्टरलाई बताएका थिए।
उपचारमा संलग्न डाक्टरले पनि सिसा नै हो भनेर पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको बताए।
नुनमा मिसाइएको भनिएको सिसा।
'सिसा खाएको भनेपछि घाँटी कोरिनुपर्ने, आन्द्रामा घाउ हुनुपर्ने, दिसामा रगत र सिसाका टुक्रा समेत देखिनुपर्ने हो। सोही अनुसार हामीले जाँच गरेका थियौं,’ डाक्टर सुवेदीले भने, ‘तर सिसा नै हो भन्ने आधार बिरामीबाट देखा पर्न सकेन।’
तर, उनीहरुले ल्याएको नमुनामा भने मसिनो नुनमा खस्रो चिनी मिसाए जस्तो सेतासेता टुक्रा भने देखिएको डाक्टर सुवेदीको भनाइ छ।
बिरामीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएपछि जेठ ५ गते अस्पतालले डिस्चार्जको तयारी थालेको थियो। तर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रकम भोलिपल्ट मात्रै आइपुग्ने बिरामीले बताएपछि जेठ ६ गते दिउँसो ५ बजेतिर उनीहरू डिस्चार्ज भएका थिए। ती बिरामी त्यसदिन आरुबोटे नभएर फिदिममै बसेका थिए। तर, त्यसै रात आरुबोटेमा ९ जनाको हत्या भयो।
बिरामी लिएर उपचार गराउन आएका सिंहबहादुर नेम्वाङले 'सिसा हो भने हो भन्नु, होइन भने होइन भन्नु' भन्दै अस्पतालमै चर्काचर्की गरेको अस्पतालका पब्लिक रिलेसन अफिसर शिशिर आङ्बो बताउँछन्। नेम्वाङले 'परिवार नै बिग्रिने भइसक्यो, सिसा हो होइन लेखेर ग्यारेन्टी दिनपर्‍यो' भनेर थर्काएको आङ्बोको भनाइ छ।
डाक्टरले तयार पारेको बिरामीको रिपोर्ट।
'हामीले चेक गर्दा सिसा फेला परेन। लेखेर ग्यारेन्टी दिन मिल्दैन। बरु प्रशासनमा राख्नुपर्ने कुरा हामी भनौंला भनेर पठायौं,' आङ्बो भन्छन्।
उक्त सिसा मिसिएको भनिएको नुन जाँचका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगर पठाइसकिएको छ। यसको रिपोर्ट आएपछि हामी अर्को शृंखलामा त्यसबारे पनि थप जानकारी दिनेछौं।
अबको शृंखलामा भने घटनाको दिन जेठ ६ गते दिनभर मानबहादुरको छटपटी कस्तो थियो? किन उनी तलमाथि गरिरहेका थिए? र, उपचारका लागि विराटनगर जान्छु भनी किन गाउँलेसँग पैसा सापटी लिए? यिनै विषयका फरक तथ्यहरु समेट्नेछौं। प्रतीक्षा गर्नुहोस्।